February 2021 – Kalfadhi
Guddiga siyaasada Baarlamaanka Puntland oo kulan looga hadlayay cabasho ka timid shacabka la qaatay Wasaaradda Qorsheynta
February 28, 2021 Hassan Istiila
Guddiga Siyaasadda, Qorsheynta & Xiriirka Caalamiga ah ee Golaha Wakiillada ayaa maanta kulan la qaatay Wasaaradda Qorsheynta Horumarinta Dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah. Kulankaan ayaa ujeedadiisa aheyd xal u helidda cabasho ka timi qaybo ka mid ah bulshada Garoowe, taas oo la xiriirta cayayaanka suuska ah oo ka dhashay kaydka raashinka hay’adda cuntada iyo beeraha ee FAO xarunteeda Garoowe. Kaas oo dhibaato weyn ku haya deegaanka ka agdhow xarunta. Xog isdhaafsi la xiriira ujeedda sare ka dib, waxaa la isla qaatay in xal degdeg ah loo helo cayayaanka suuska ka…
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo maanta shir guddoomiyay kulanka Golaha Wasiirrada
February 27, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal ayaa maanta shir guddoomiyay shir degdeg ah oo ay iskugu yimaadeen Golaha Wasiirada Galmudug. Shirka maanta ayaa looga hadlay xaaladaha cudurka covid-19 ee deegaannada maamulka. Wasiir Dowlaha Wasaarada Caafimaadka Galmudug ayaa kulanka looga dhageystay warbixin kusaabsan xaaladaha cudurka Covid-19 iyo sida wasaaradda caafimaadka Galmudug ay ugu diyaar garowday in cudurku uusan bulshada Galmudug ku dhex faafin
Puntland iyo Jubbaland oo ka hadlay heshiiska dhex maray Dowladda Federalka iyo Midowga Musharraxiinta
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa dhaweeyay heshiiska ay wada gareen Dowladda Federaalka iyo Midowga Musharraxiinta, taariikhdu markii ay aheyd 25 Feb 2021. Sidoo kale waxaa ay soo dhaweeyeen in DFS ay garwaaqsatay masuuliyadda wixii ka dhacay Mogadishu, 19kii Feb, ayna oggolaatay in baaritaan madax banaan lagu sameeyo. Puntland ayaa sheegtay in ay ka rajeyneyso Dowladda Federaalka ah dhammeystirka wax ka qabashada caqabadaha kale ee ku xeeran qabashada shir wadatashi ah oo loo dhan yahay oo lagu dhammeystirayo arrimaha muranka ay jiraan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyey Ra’iisul Wasaaraha XFS…
Madaxweyne Farmaajo oo soo dhaweeyay heshiiska dhex maray dowladda iyo midowga musharraxiinta
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey Heshiiska dhexmaray Dowladda iyo Midowga Musharaxiinta oo xalay wadajir loo soo saaray. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble dadaalka uu ku bixiyey heshiiska wadajirka ah iyo guud ahaan maareynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go’an tahay in la dhaqan geliyo Heshiiskii 17-ka Sebteembar ee ay wada gaareen Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladaha Xubnaha ka ah, ayna meel mariyeen Labada Aqal ee Baarlamaanka. Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa ku ammaanay Madaxda Dowlad-goboleedyada Galmudug, Hirshabeella iyo…
February 25, 2021 Hassan Istiila
Kulan u dhexeeya Ra’iisul Wasaare Rooble, Musharaxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle ayaa maanta lagu qabtay hotel Decale ee magaalada Muqdishu. Kulanka oo looga hadlayay xaaladda siyaasadda ee dalka, ayaa laga soo saaray ilaa iyo lix qodob oo uu kamid yahay in dib loo dhigay banana bixii jimcaha ay dhigi lahaayeen musharraxiinta. Dowladda Federaalka ayaa sheegtay inay k xuntahay wixii dhacay 19 Febraayo isla markaana ka tacsiyadeyneyso, iyadoo Guddi madax bannaan loo saaray, kuwaasoo baaritaan ku sameeya wixii dhacay. Halkan hoose ka akhriso:-
Ra’iisul Wasaare Rooble oo maanta kulan la qaadan doona Midowga Musharraxiinta
Midowga Musharixiinta ayaa goor dhow gaaray Decale Hotel ee Muqdisho oo uu ka furmi doono shir u dhaxeeya Midowga Musharixiinta iyo Raa’iisul Wasaare Rooble. Kulanka ayaa looga hadli doono xaaladda cakiran ee uu dalku marayo, gaar ahaa banaanbaxyada iyo doorashooyinka. Halkan kala soco kulanka…
“Ka quuso in aad ka quusato Soomaaliya”
Marka laba ama dhowr dhinac ay is khilaafaan, fool-ka-fool la isu arki diido, aanuu jirin xiriir kale oo toos ah; Marka uu kala shakigu bato, siina kobco ilaa uu horseedo kala aamminbax. Dhinac kastaa wuxuu isu sheegaa waxa uu ku gar leeyahay oo keliya. Wuxuu quus ka istaagaa dhinaca kale, kamana fisho wax aan ahayn shar iyo xumaan hor leh. Taasi waxay dhinac kasta geyeysiisaa in uu ahaado col-u-joog, waran-la-yuurur ah. Wuxuu diiradda saaraa waxa uu dhanka kale u dhimi karo, isaga oo aan xisaabta ku darsan waxa uu isagu…
Baarlamaanka Hirshabelle oo yeeshay kulan looga hadlayay Dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha
Baarlamaanka Hirshabelle ayaa yeeshay kulan ajandihiisu uu ahaa dhageysiga warbixinnada Guddiyada Xeer Hoosadka iyo Dastuurka Baarlamanka Hirshabelle. Guddoomiyaha Guddiga Dastuurka ayaa ugu horeyn Xildhibaannada ka hor akhriyey qodobadii ay dib-u-eegista iyo wax-ka-badalka ay ku sameeyeen. Dhinaca kale Guddoomiyaha iyo Xoghayaha Guddiga Xeer Hoosadka ayaa Xildhibaannada uga warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay iyagoo Xildhibaannada ka codsaday in xildhibaannada ay gacan ku siiyaan Guddashada Waajibadkoda. Guddiga ayaa u soo jeediyeen Guddoonka Golaha inay ka shaqeeyan sidii Xildhibaannada u heli lahaayen xuquuqdooda Dastuuriga oo dhammeystiran. Kulanka oo ahaa Kalfadhiga 1aad Fadhigiisa 18aad ayaa waxaa…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka tacsiyadeeyay geerida Ugaas Xasan
February 24, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Alle ha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo xalay ku dhintay Muqdishu. “Aniga oo ku hadlayo magaca Guddoonka iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa Qoyska iyo Ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho”. “Ugaaska waxa uu ka mid ahaa dhaqanka Soomaaliyeed ee mudada dheer ka shaqeynaayay dib u heshiisiinta iyo…
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Ugaas Xasan uu door muuqdana ka soo qaatay dib-u-heshiisiinta dadka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Gobolka Hiiraan ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle oo caawa uu ka baxay Alle ha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble. Madaxweynaha ayaa xusay in Ugaasku uu ahaa hurmuud dhaqan oo lagu soo hiran jiray, door muuqdana ka soo qaatay dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, adkeynta wadajirka iyo dadaalladii dib u dhiska dowladnimada. “Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Alle ha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble…